I-High End Ikhishi Lombhobho Ibhulashiwe Nickel Donsela Phansi
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW Okukalwe Kakhulu Donsela Phansi Oompompi Bekhishi I-Hole Eyodwa
I-WOWOW Top Rated Donsela phansi Ikhishi Faucets I-single Hole
Kulinganiselwe ngo- 4.98 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 41 izilinganiso ikhasimende
(41 Izibuyekezo ikhasimende)
Le Khishi Faucets yenziwa ngensimbi yethusi futhi kwenziwa ngayo ukugeza. I-SUS304 inemvelo futhi inempilo, futhi impilo yethu incike kumgcini wethu. Ingashintshwa ngokujikeleza okushisayo nokubandayo, okulula ukukungena esikhundleni, okulula ukukufaka, okwakudala nokunhle, futhi kufanelekile umhlobiso ohlukahlukene wokugezela nekhishi
Donsela phansi imishini yokucwila ekhishini 2310301
Ukukhetha isikebhe sokucwilisa ekhishini, esinye sezici ezibaluleke kakhulu ukuvikeleka kwakho kwempilo nokuvikelwa kwemvelo. Izicishi zokubilisa zasekhishini ezingakhiwa ngezinto eziqinile nezisezingeni eliphakeme, zingathinta impilo yakho ngenxa yezinsalela ezinobuthi ezixubana namanzi akho okuphuza. Imishini yokudonsa ekhishini yokudonsa phansi ekhishini yeWOWOW yenziwe nge-nickel ehlanganisiwe nezinto ezisezingeni eliphezulu. Ngokuhambisana nezakhi zensimbi engagqwali, lezi zidonsa zasendlini ekhishini zikunikeza inani elihle kakhulu lemali ngokuya ngekhwalithi, ukuqina nokumelana. I-valve ephezulu ye-ceramic disc yalezi zidonsa phansi imishini yokucwilisa ekhishini ingahlala okungenani imijikelezo yamanzi eyi-500,000 okungenani. Lokhu kudlula noma iyiphi indinganiso yezimboni. Ngaphezu kwakho konke, donsela phansi imishini yasekhishini yeWOWOW yonga amanzi ngenxa yekhanda layo lokuphrinta elisha. Nakanjani uzokubona lokhu kumthethosivivinywa wakho wamanzi!
Ngaphandle kwempilo, ukusebenza kwalokhu kudonsa imishini yokucwila ekhishini kuhlukahlukene futhi. I-multi-functionalsprayer ingasetshenziswa ngezindlela ezimbili: umfudlana onzima lapho ugcwalisa ipani ngamanzi ngokwesibonelo, nesifutho esinzima sokuhlanza izitsha ngokwesibonelo. Isikhiphi esisodwa sekhishini sokuphatha sikwenza kube lula ukulungisa inani kanye namazinga okushisa kwamanzi. Ngakolunye uhlangothi, i-swivel spout ingaphenduka ama-degrees angama-360 ngenduduzo ephezulu. Okokugcina kodwa okungatheni, isikebhe sokucwilisa esine-lever sibonisa i-hose yokukhipha engu-1.5 m ukukunikeza indawo enkulu yokuwasha eyi-80 cm. Lokho kusiza ikakhulukazi uma une-ekhishini ecwebe kabili, kepha futhi nekhishi elilodwa eliconsayo, le micimbi yokudonsa ikhishi yeWOWOW ingaba usizo. Akukho ndawo eyodwa phakathi noma eseduze kwekhishi lakho elisheshayo engenakufinyelelwa ngalezi zinto zokudonsa ekhishini ze-WOWOW.
Imishini yokucwilisa ekhishini ekhanyayo yokudonsa ekhishini
Ngaphandle kwempilo nokusebenza kahle, ufuna isitayela sokudonsa phansi ekhishini kanye. I-faiz ekhishini ekhishini kufanele yakhe ubumbano olulodwa oluhlangene nayo yonke design yakho yasekhishini. Abanye abantu bawukela phansi umthelela womshini wasekhishini. Lapho umuntu engena ekhishini, ukunaka kwakhe kukhangwa ngokuzenzakalela emaphepheni ekhishini. Yize izikebhe zasekhishini zincane kakhulu, zinomthelela omkhulu ekumbambeni kwekhishi lakho. Ngenxa yalokho kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe ikhishi lakho lasekhishini ngobuhlakani, ngoba kunganika ikhishi lakho ukuthuthuka okuhle. Lezi ze-nickel donch dow ekhishini zokucwilisa ekhishini ze-WOWOW zizokunikeza lokhu kukhuphula ngaphandle kokungabaza.
Donsela phansi imishini yokucwilisa ekhishini inikeza inzuzo enhle ngaphezu kwezinye izinhlobo zamakhishi esinki ekhishini. Ngenxa yepayipi lamanzi elihoxisekayo, ungakwelula kalula isikebhe sakho ekhishini. Ngalesi sici esilula, ungafinyelela cishe kunoma iyiphi indawo ngaphakathi noma eseduze kwekhishi lakho. Futhi, i-hose ihlanganiswe ngobuqili ekhishini lakho lokuconsa ekhishini, ngakho-ke ngeke ubone noma yimaphi ama-hoses wamanzi uma ungasebenzisi isikebhe sakho sokudonsa phansi ekhishini. Isimo okuwukuphela kwaso ukuthi sibe nendlela esezingeni eliphakeme yokuhoxisa. Kungaba ukungaguquki okuphelele ukuthi kudilize imishini yokucwilisa ekhishini lapho ipayipi lamanzi lingaphindeli emuva njengoba kufanele. Kufanele isebenze kahle i-100% ukukunikeza induduzo ephezulu.
Thuthukisa ikhishi lakho ngalezi zinsimbi zokudonsa ekhishini
Oompompi bokudonsa ekhishini abadonsa phansi be-WOWOW benza impilo yakho ibe lula. Idizayini yebhola yamandla adonsela phansi yale mibhobho yasesikhishini yenza kube bushelelezi ngokuphelele ukukhipha nokuhoxisa ipayipi lamanzi. Ibhola lamandla adonsela phansi libuyisela emuva isifutho ngokuzenzakalela, ngakho-ke ngeke kudingeke uzikhandle nhlobo lapho usuqedile ukugeza isinki sakho sasekhishini. isitayela nokusebenza. Njengoba kushiwo, ompompi basinki abadonsa phansi beWOWOW banikela ngemisebenzi emibili yamanzi: ukusakaza nokufafaza. Le misebenzi emibili ikuvumela ukuthi ushintshe kalula futhi uguqule kusuka ku-spray usakaze noma okuphambene nalokho. Ungakwenza lokhu ngokunyakaza kweminwe okulula ngaphandle kokumisa amanzi kuqala. Inkinobho isebenza kahle futhi inikeza induduzo enkulu.
Amanani entengo afanelekile adiliza imishini yokucwilisa ekhishini
Ikhwalithi iza ngentengo, kepha hhayi e-WOWOW. I-WOWOW ithole ukukunikeza ngemishini yokudonsa ekhishini esezingeni eliphakeme eseyathengiswa. Ngenxa yokutholwa kwayo okusebenzayo kwezinsizakusebenza kanye nensiza ekhiqizwa kakhulu kanye nenqubo yokuhlola, i-WOWOW iyakwazi ukukunikeza udilize imishini yokucwilisa ekhishini engancintisana nanoma iyiphi imishini yokucwila ekhishini ye-A-brand, kanti nokho ngengxenyana nje yalezo izintengo. Ngakho-ke siyaqiniseka ukusho ukuthi ngeke uthole izinciphisi zokudonsa ekhishini ngamanani angcono kuneWOWOW. Ngenxa yalokho, i-WOWOW ikunikeza isilinganiso esihle kakhulu samanani oyothola emakethe.
Akusizi ngalutho i-WOWOW inikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90 kusiyisi sayo sokudonsa phansi ekhishini izimbotshana zekhishi. Uma ucabanga ukuthi ukudonswa kwethu phansi ekhishini akusikho obekulindelekile kukho, sizokubuyisela ngaphandle kokuhlupheka noma imibuzo ebuziwe. Elula njengalokho. Simele imikhiqizo yethu futhi siyaqiniseka ukuthi sinikela ngemibhobho yokucwila ekhishini ephezulu. Ngakho-ke siyazi ukuthi ngeke udumazeke futhi uzomangaza kahle ngephethenisi yakho entsha yekhishi. Sinamakhasimende amaningi abuya kuwo wonke umhlaba, futhi siyaqiniseka ukuthi uzosikhetha ngokuzayo.
Ukufaka okulula kuqinisekisiwe
Imishini yokudonsa ekhishini yokudonsa ekhishini ye-WOWOW kulula ukuyifaka ngenxa yokusebenziseka kwayo okulula. Ungasifaka lesi isikebhe ngesinyathelo esisodwa nje. Ngakho-ke ungafaka imishini yokudonsa ekhishini ekhishini. Akudingeki uqashe uchwepheshe obizayo ukuze ukwazi ukonga imali eningi lapha. Isikebhe sokukhanyisa sekhishini seWOWOW siza ne-plate desk, ibhola lamandla adonsela phansi, iqoqo lamakhompiyutha amanzi ashisayo nabandayo kanye nesethi yezinto ezifakwayo. Le setha ephelele iqinisekisa ukufakwa okusebenzayo nokusheshayo. Easy kanjalo!
Izinzuzo zokudonsa phansi imishini yokucwilisa ekhishini ngamafuphi:
· Unika i-wow-factor kunoma iyiphi ikhishi
· I-nickel ebukeke ngamehlo
· High-donsa phansi hose yamanzi
· I-lever yesandla esijabulisayo
· Imisebenzi emibili yamanzi
· Kwenziwe ngezinto zethusi ezisezingeni eliphakeme kakhulu
· Easy ukuhlanza futhi kulula ukuyigcina
SKU: 2310301 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Donsela Phansi, Ihotela elilodwa
21.3 x 11.2 x amasentimitha angu-2.8
1or 3 Hole Deck Mount
Ikhishi / Endlini / Ezohwebo / irestshurenti / Ikhaya / amasinki ama-1or2
Umpompi wasinkini wasekhishini; Amapayipi Amanzi Ashisayo Namakhaza angama-50cm; Donsela phansi isifutho; Ipuleti ledeski; Ukukhweza izesekeli
Simiselele ompompi abadala basekhishini ngalena futhi bengingeke ngijabule ngokwengeziwe! Umyeni wami wahlabeka umxhwele lapho evula ibhokisi. Uthole umpompi upakishwe kugwebu futhi awuphazamisekanga ngesikhathi sokuthumela. Into elandelayo amhlaba umxhwele ngayo yimiyalo yokufaka ebicacile futhi icacile. Yonke inkinga engaba khona kwakuyikheli nomkhiqizi walo mkhiqizo. Kusukela ekuqondisweni kuye ezansi kuma-adaptha nama-washer afakiwe. Ukufakwa kwakulula futhi ompompi bangena okokuqala.
Kukhona ihlaya elisebenzayo phakathi kwethu lokuthi noma iyiphi iphrojekthi esiyenzayo okufanele ithathe ihora noma amabili; kuzosithatha 2 izinsuku. Hhayi lena esibe nezinkinga eziningi ekususeni ompompi wakudala uma kuqhathaniswa nehora elingu-1/2 elincane lokufaka kule!
Umpompi okahle kakhulu, ikakhulukazi lapho abaningi bewuthanda befuna imali eningi kakhulu. Sasibhajwe ngepayipi lepulasitiki / le-aluminium lapho sihlala ekhaya lethu elisha. Iputshukile empompini futhi simosha amanzi. Lokhu kube yisibuyekezo esikhulu sengoma. Siphinde sathatha indawo yehadiwe hardware kusukela lokho kwaphuma kwaqhubeka. Uma uhlehlisa le phrojekthi, ngingasho ukuthi ngithole lokhu kuqala bese uziphoqa ukuze uyenze. Ngeke udumazeke.
Angiwathandi amaphrojekthi wamapayipi. Ngeshwa, kuye kwadingeka ngifake ompompi abaningi (i-Moen, Delta, Pfister) kunalokho engikukhumbulayo ukukhumbula. Le WOWOW iyona elula kunazo zonke engake ngazenza. Esikhundleni sokuyifaka kusinki ngesokhethi yomphimbo ojulile eminye imikhiqizo enikezayo, lokhu kusebenzisa isikulufa sokusetha esilula kakhulu lapho okugxishwe kwikhabethe eliyize elinokukhanya okulinganiselwe nesikhala. Imigqa yokuhambisa eshisayo nebandayo ibhalwe ngokusobala ngokufakwa amakhodi ngombala, kanye namagama athi hot and cold. Njengebhonasi eyengeziwe, ifike ne-3/8 ″ kuya ku-1/2 ″ i-adaptha engangiyidinga ukuxhuma ku-valve evaliwe. Lokhu kungisindisele uhambo oluya esitolo sehadiwe. Kuyinto ompompi engcono ukufaka naphakade.
Ngaphuza umpompi okwesikhashana futhi ngacabanga ukuthi ngizozama lokhu ngoba kwakonga kakhulu kunabanye engangikubonile. Vele, benginovalo oluncane ngoba bekungelona igama elikhulu futhi sihlelelwe kancane ukuhamba namagama amakhulu. Isebenza kahle kakhulu futhi noma ngingayifaka futhi lokho kusho okuningi (ngokujulile!). Imiyalo ibingacaci kahle kimi kepha lokhu bekungumzamo wami wokuqala kunoma yini enjengale (bonga ubuhle be-google ne-youtube)! Bekufanele ngithenge izixhumi zokunwetshwa kwamanzi ukuze ngifinyelele lapho ngithola khona amanzi njengoba ompompi bami abadala bebenentambo eqinile yethusi eyehla kuyo futhi lokhu sekunezintambo ezihlinzekwayo. Izandiso zazingaphansi kwama- $ 10 esitolo esikhulu sehardware. Ngiyithandile le ngoba ibuye ihlangane kangcono nesinki lami elijwayelekile lasekhishini ngoba alicwebezeli kakhulu kepha lisabukeka lisha futhi lihlanzekile. Kuyinhlanganisela enhle yesithuthukisi ngaphandle kokuthanda kakhulu. Ngiyakwazi ukufika emabhodweni amakhulu kube lula futhi nokho, umpompi awukhulu kangako kangangokuba ubukeka ungafanelekile ekhishini lami elincane. Ishwibeka kahle / ngokushelela, isifutho / ukusakaza okuhle, okulula ukushintsha phakathi. Kuhle kakhulu, inani elikhulu. Ngincoma kakhulu. (Angibuyiswanga nganoma iyiphi indlela ngalokhu kubuyekezwa futhi anginanoma iyiphi inkampani engihlangana nayo. Ngihlala ngikusola kancane ukubuyekezwa okukhokhelwayo.)
Ngemali awukwazi ukuyishaya le ompompi! Inezici ezinompompi ababizayo kakhulu. Yonke inqubo kulula ukuyifaka. Ngithanda iringi nokunamathisela okunamathiselwe ukunamathisela ompompi ukucwila emphemeni. Amapayipi onke anelebula futhi abonakala njengomsebenzi osindayo. Uma usunamathisele isisindo isifutho sikhipha kalula kakhulu bese sihlehlela emuva njengoba kufanele. Ukuphela kokuphazamiseka kokusebenza engikubonayo yinkinobho yokufafaza. Inenkinobho yokuguqula uhlobo ezoshintsha phakathi kokusakazwa okuvamile, isifutho nokuhlanganiswa kwesifutho nokusakaza. Lokhu kushintshwa kuluhlobo lwe-floppy futhi kuzocishe kushintshele kumodi yokufafaza nokusakaza nje ngokuthinta isifutho. Isikhathi sizotshela ukuthi le nkinobho ibambelela kanjani. Ngingayincoma le ompompi!
Ngithengele lo mpompi indodana yami nomalokazana wami ngesipho sokufudumala endlini. Babenompompi wakudala we-chrome ongenasifutho (futhi abanaso nesishiwashingi). Ngiqale ngayalela imodeli yethusi b / c ebengicabanga ukuthi izofana nalokho ebesivele benakho. Banqume ukuthi bafuna abamnyama ngempela esikhundleni salokho, ngakho-ke ngibuyise ithusi esitolo sendawo yethu iKohl (kulula kangaka!) Futhi ngayalela omnyama. Ake ngikutshele - le ompompi yibhomu! Ingcindezi yamanzi iyamangalisa futhi i-sprayer isebenza kangcono kunanoma iyiphi enye engake ngiyisebenzisa, futhi angisho nokuthi ibukeka kahle kanjani. Benginokwesaba okuncane uku-oda igama lomkhiqizo engingakaze ngizwe ngalo, kepha ngincoma lo mkhiqizo kunoma ngubani ofuna ompompi oqinile kodwa ongabizi kakhulu. Umsebenzi omuhle WOWOW !!!
Sinekhaya lePark Model endaweni yokubhuka eseFlorida enosinki omncane ophindwe kabili. Umpompi omncane esasinawo kwakuhlale kuyinkinga uma sifuna ukugeza noma yini enkulu. Le ompompi isebenza kahle ngokuphelele.
Ngifake izinkanyezi kathathu ekufakweni ngoba isisekelo sepayipi sasisikhulu kancane kunomgodi osinki wethu ongenalutho. Bekufanele ngiyifayele ukuze ngikhulise umgodi. Angiqiniseki ukuthi imbobo kusinki yethu ibincane yini kunokujwayelekile noma ngabe isisekelo sompompi sasisikhulu ngokungajwayelekile. Lapho sengikutholile kufakwe umkami uyayithanda. Yinto ebalulekile leyo !!! Ngqo ??
Ngiyayithanda ipompi yami entsha! Ngangiphikisana ngokuthi ukuthenga enye ngentengo ephindwe kabili kwa-Home Depot yangakithi kungaba yindlela “ephephe” kakhulu yokuhamba, kodwa senginakho lokhu cishe inyanga manje futhi ngiyayithanda. Inekhwalithi enhle futhi ibukeka njengompompi wami wangaphambilini (obiza kakhulu, igama lomkhiqizo).
Ngithenge ikhaya elisha ngonyaka owedlule futhi umakhi wafaka ompompi ababukeka abaphansi. Ngijabule kakhulu ngendlela le mpompi ebukeka futhi isebenza ngayo. Ngingasho kuphela ukuthi isikhalazo sami esincane ukuthi amanzi aphuma ngamandla, kepha ngijwayela ukuba nokuthinta okulula lapho ngivula. Kulula ukushintsha kusuka ekusakazeni uye kufafaza, angizange ngisebenzise inkinobho yokumisa isikhashana yize isebenza. Bengiyifakelwe ngumuntu osebenza ngesandla futhi akabanga nankinga yokuyifaka. Kuyinani elikhulu uma kuqhathaniswa ne-Home Depot noma i-Lowe njengoba kungekho lutho kulolu hlu lwamanani.
Nginikela izinkanyezi ezi-5 kuze kube manje. Sibe nayo cishe isonto elilodwa noma ngaphezulu futhi siyayithanda kuze kube manje. Kwakulula kakhulu ukuyifaka futhi isiphetho esimnyama se-matte sihamba kahle ngamatafula wethu wegranite. Esikhathini esifushane esibe nayo sekuvele kuphume umbhobho wethu wokugcina esithenga ngaphansi konyaka ongu-1 odlule. Umthengisi ngeke enze kahle kumkhiqizo wabo. Bengikade ngifuna isikhashana futhi lena ibonakale ingcono ngentengo futhi kubonakala ngathi inezibuyekezo ezinhle ezithembekile. Njengoba ngishilo ukuthi bekungamasonto ambalwa kakhulu kepha kuzobuyekezwa ngokuhamba kwesikhathi futhi ngithemba ukuthi umbiko omuhle wayo!
Le ompompi kufanele ibe yimfihlo enkulu kunazo zonke emhlabeni. Ikhuphuka kahle, ibukeka kahle, isebenza kahle futhi inentengo enhle. Simiselele imfucumfucu yepulasitiki ku-RV yethu futhi unkosikazi uyayithanda. Lokhu kuzosebenza kahle nasendlini.
Le ompompi yinkulu !! Ngingowesifazane oneminyaka engama-22 obekufanele angishintshe ompompi wami egunjini lami lasendlini ngoba owami wangaphambili wephukile. Anginalo ulwazi lokushintsha ompompi noma yiluphi uhlobo lwamapayipi, kepha lokhu bekulula kakhulu ukukufaka. Ngibuke ividiyo ye-1 yemizuzu ku-Youtube ukuthi ungayifaka kanjani le ompompi futhi ngiyenze ngemizuzu engaphansi kwengu-20. Iza nemiyalo, kepha ngithole ukuthi ividiyo kulula ukuyiqonda nokuyilandela. Manje njengoba isifakiwe, iqinile kakhulu ngaphandle kokuvuza futhi ingcindezi yamanzi ingumphathi. Ncoma kakhulu le ompompi!
Ngijabule ngempela ngale mpompi. Kwakuyintengo enhle kakhulu ukuthi ngifanele ngiyizame. Isifutho samanzi sihoxisa kahle kufanele uchofoze nje endaweni yaso. Kepha ngiyathanda ukuthi ungayishintsha isuke isifutho esigcwele iye eshafini futhi uma uyinamathisela unenketho yokuqinisekisa ukuthi isibambo sakho sinemvume yokungashayi i-window sill noma i-backsplash yakho. Sikwazile ukuvula isisekelo ngakho-ke lapho ngisebenzisa isibambo ngeke size sishayise iwindi lami. Nezimo futhi kulula!
Hewu! Lokhu bekungcono / kulula ukufaka kunokucabanga kwami. Isebenza ngokumangalisayo, inqubo yokufaka yayicishe ibe yihora elingu-1/2. Uma ungesabi ukuba manzi mhlawumbe ungcolile ngaphansi kosinki, izintokazi ungakwenza. Yonga imali yakho ekukhokheleni uchwepheshe. Beka ezinye izingubo zokulala zakudala uthathe isikhathi sakho ngemiyalo ongayidinga uwoyela wokufafaza ukuze ukhulule ukubambelela okuqinile. Kodwa-ke, ikhwalithi yale mpompi ifanele isikhathi nemali yakho. Ngijabule ngokukhetha kwami.
Ingxenye enzima kunazo zonke kuyo yonke le nqubo bekuwukususa umpompi wakudala wasekhishini. Kwakunamantongomane amancane kakhulu ayehlutshiwe. Bekufanele ngisebenzise ukusonta kwesitsha ukusisusa. Ngikholwa ukuthi ngubani owake wafaka leyo ompompi wasebenzisa ithuluzi elingalungile ukuqinisa leyo bhawodi. Ngaleli ompompi ngivele ngigaxe iwasha enkulu enjenge-nut ngesandla ngiqinise ngangokunokwenzeka, bese ngiyiphothula ngokugoqa izikulufo ezintathu ngomshayeli wesikulufu. Kunemiyalo yokukhombisa kangcono ukuthi ungakwenza kanjani.
Ngakho-ke njengomhwebi nganginokungabaza impela ngenkathi umkami ethatha le ompompi ukuthi izofakwa ekhishini lethu ngoba eyodwa angikaze ngiyizwe ngophawu futhi ezimbili yayingaphansi kuka- $ 75 okusho ukuthi uvamise ukuyifaka esikhundleni emasontweni amabili. Kepha lokhu bekuhlukile le ompompi yenziwe yaqina kakhulu futhi ngokuthembeka ingcono kunanoma iyiphi ipompi engibe nayo noma engiyifakile eminyakeni eyishumi nanhlanu ebenginayo ekuhwebeni ngamapayipi bazophinda bathenge lo mkhiqizo ukuzama ezinye ompompi babo ngaphandle
Ngiyayithanda le ompompi. Lihle futhi liyasebenza kakhulu. Kuhle ukwenza izitsha nokupheka kepha nokunikeza izitshalo zami ukugeza okuncane nokunisela. Ngijabule kakhulu ngale mpompi. Umthengisi ubemkhulu futhi into ifike ngesikhathi esifanele futhi isesimeni esihle. Ngingathenga nakanjani kulo mthengisi futhi.
Kuze kube manje kwenziwe lokho ebengikulindele ukuthi ngizohluleka ukwenza. Akukho ukuvuza, futhi akukho monakalo ngemuva kokuwushaya ngamabhodwe ngengozi kepha ngibe nawo izinyanga ezimbalwa kuphela, ngakho-ke lokhu akusona isivivinyo sokuhlukunyezwa ngokuphelele.
Ukufaka kwakungeyona into encane, ompompi bahlala benesicefe ukufaka njengoba ukufinyelela kunqunyelwe, kepha uma kuqhathaniswa nemiklamo emidala enokufakwa kwe-janky okudinga ukusonta okukhulu esikhaleni esincane, lokhu bekuyitoni elula. Ngikwazile ukufaka lokhu ngaphandle kwezandla ezimbili.
Bengifakwe le ompompi ngesandla ngesandla ngakho angikwazi ukuphawula ngokulula kokufakwa kepha ngingasho ukuthi yinhle futhi isebenza kahle. Kulula ukushintsha phakathi kokufafaza nokusakaza. Inkinobho yokumisa isikhashana isebenza kahle, kanjalo nesici sokudonsela phansi. Nganginompompi ophansi, oqondile ngaphambili futhi leli yiphupho eligcwaliseka kimi. Enye into engiyithandayo ukuthi ungagcwalisa iziqukathi ezide kalula. Ibukeka busezingeni eliphezulu futhi isesimanje futhi inesiphetho esihle. Ngingayincoma kakhulu le ompompi.
Ngisanda kuqeda ukufaka lokhu futhi kuhle kakhulu. Lesi yisikhathi sami sokuqala ukushintsha ompompi ngedwa futhi kungithathe isikhathi eside ukukhipha endala bese kwenza ukufaka okusha. Lapho sengiyikhiphile endala, kwangithatha ngaphansi kwemizuzu engu-8 ukuyifaka lena entsha futhi ngigcwalisa amanzi ngayo. Inesici esihle sokumisa ekhanda ngakho-ke awudingi ukufinyelela ukucisha amanzi uma udinga ukudonsa ikhanda ngaphesheya kwekhawunta noma okuthile.
Iyunithi yilokho engikufunayo ukushintsha umpompi wami wakudala wasekhishini. Kungumkhiqizo wenani elikhulu uma uqhathaniswa neminye imikhiqizo ingasaphathwa eyomkhiqizo oqanjwe igama. Ukubukeka okuhle, okwakhiwe kahle nokufakwa kulula kakhulu. Ngifisa sengathi banenketho yekhanda lokufafaza engathinti. Ngithenge eyodwa ukufaka esikhundleni sesifutho futhi ngiyayithanda. Kulula kakhulu. Ngicabanga ukuthi lolu hlobo lomklamo selukhule kakhulu futhi noma kungelona igama lomkhiqizo, kufanele lusebenze kahle. Ngiyayincoma.
Ngiyayithanda! Kubonakala kukhulu futhi kwenziwe kahle. Kungukuthuthuka okukhulu kusuka kulokho ebenginakho ngaphambili. Ngikuthanda kakhulu ukuthi kushintsha kalula emuva naphambili nokuthi isifutho sibuyela kanjani endaweni yaso cishe ngokuzenzekelayo. Ukuthenga okuhle uma kuqhathaniswa nezitolo zebhokisi ezithengisa lokhu ngamadola ayikhulu noma ngaphezulu. Ngoba kwakuyizindleko eziphansi kangako ngakwazi ukukhokhela umuntu osebenza ngezandla ukuyifaka. Ngaphandle kwalokho ngabe ngibe ngaphansi kosinki amahora amaningi! Lol.
Umpompi wasekhaya kaMama waqala ukuvuza futhi wayengafuni ukubhekana nokushintsha isheringi nakho konke lokho. Nginayo lena futhi esikhundleni sayo kwangena cishe imizuzu engama-30. Kuthathe imizuzu engama-20 ukukhipha endala, yike. Kuze kube manje, sekuphele izinyanga ezintathu futhi kusasebenza kahle. Ngafaka ngaphandle kwepuleti emgodini owodwa futhi kubukeka kukuhle nge-IMO. Okuwukuphela kwento ukuthi inesixhumi esisha esingu-3/8 line samanzi futhi iningi lamavalvu amadala lingu-1/2 ″ ngakho-ke bhekela lokho. Ngaphandle kwalokho, intengo enkulu nomkhiqizo omuhle.
Le ompompi inkulu. Siyithengele usinki wegumbi lethu lokuhlanza izingubo, ukufaka esikhundleni sompompi obiza imali ephindwe kathathu kepha kuhlale iminyaka embalwa. Bekulula kakhulu ukuyifaka futhi ibukeka kahle futhi isebenza kahle, unkosikazi wami uphakamise ukuthi siyifaka kusinki wethu omkhulu wasekhishini. Lapho isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu lethu lasekhishini siphela sizongena esikhundleni salinye lalokhu, hhayi u- $ 3. eyodwa (olunye uhlobo lomkhiqizo) olukhona njengamanje. Siyayithanda, i-WOWOW Faucet.
Sathenga le ompompi njengokufaka esikhundleni sesibambo esivuzayo esasibhekene naso. Lena yinhle! Kubukeka njengalezo ezisezingeni eliphakeme ongazithenga esitolo sehadiwe kodwa ngengxenyana yentengo. Umyeni wami uyifakile. Sibe nenkinga encane lapho sifaka, kepha ngicabanga ukuthi bekuyinkinga yokuzika yomuntu siqu ebilungiswa kalula lapho umyeni wami echela ezinye izinkuni ebezisendleleni nokugcina ompompi bungaqiniswa ngokuphelele. Waneliseke ngokuphelele ngokuthenga.
Le ompompi kwakuwumoya omnandi ukuyifaka. Isebenza kahle, futhi ngiyasithanda isitayela. Ukumbozwa okumnyama kushelele futhi kumelana nokuphrinta - engikuthokozelayo njengoba bengikhathazekile ukuthi kuzobonisa yonke into encane. Ukuphela kwento engifisa ukuthi le ompompi ibe nayo uzibuthe noma okuthile okufana nokusiza ukudonsa ompompi ubuyele endaweni yawo lapho usuqedile ngemuva kokusebenzisa ipayipi lesifutho. Ibuyela endaweni yayo kahle kepha kufanele ukhethe ukuyisebenzisa ngesandla. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu silungise kahle emuva naphambili kusuka ekusakazweni kusifuthelela kuze kube manje. Akukaze kube nezinkinga ezivuzayo njengoba abanye babeke amazwana ekubuyekezweni (kufakwe inyanga engu-1 edlule). Sine ingcindezi kangcono kakhulu ngokusebenzisa le ompompi kuka yethu yokugcina kanye. Asikasisebenzisi isici esithi “misa isikhashana” - kubonakala kungenangqondo lapho ungavele uvale amanzi kalula, kepha mhlawumbe abanye bakuthola kuwusizo lokhu. Sekukonke, ukuthenga okuhle.
Umkhiqizo ufike ngokushesha. Bengiyifakelwe iRoto-Rooter ngoba indlu yami ineminyaka engama-23 ubudala futhi bengifuna noma yiziphi izinkinga zamapayipi ezisingathwa ngochwepheshe. Kuvele ukuthi uplamba unompompi ofanayo ncamashi. Ubengitshela ukuthi weneliseke kangakanani ngayo. Ezinsukwini ezimbalwa ebesizisebenzisa ngivumelana naye ngokuphelele. Nathi senelisekile kakhulu. Ngiyayincoma le nto uma ufuna ukuthuthuka okuhle ngezici ezinhle kakhulu.
Ngiyayithanda! Umpompi wakudala owawudonse iminyaka ye-OMG, ekugcineni wehluleka! Ngibheke lesi sitayela futhi ngazi ukuthi ngiyasifuna.
Ngikhethe lena futhi ngijabule nge-100%. Isebenza kalula, umsebenzi wokufafaza unamandla futhi umsebenzi ojwayelekile uphelele. Ingxenye ebimbi kunazo zonke yayikade ikhipha endala, amantongomane amakhulu abhodlile ayegqwalile kakhulu, futhi asendaweni engenakwenzeka!
Umpompi okahle impela. Ikhwalithi enhle. Ngingalindela ukukhokha okuningi kwesinye sezitolo ezinkulu zokuthuthukisa ikhaya. Ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga. Ukuphela kokugxekwa enginakho kufanele ukuthi uqinisekise ngokwenza ngokwakho ukuthi ikhanda limiswe kahle uma ulidonsela phansi. Ayizenzakaleli endaweni yayo efanele ngaphandle kokulungiswa okuncane. Lokho kuyinkinga encane.
Umfutho wamanzi muhle. Inenketho enhle yokufafaza nenketho yokumisa isikhashana.
Yenziwe yaqina. Kulula ngempela ukufaka. Sibe nabanye abaningana abangazange bafake noma basuse okulula kakhulu nalapho ubuhlungu obukhulu bokusebenza nabo. Lokhu kube lula kakhulu. Kumangazwe indlela enhle futhi eqinile ngayo. Inkinobho yokushintsha phakathi kwemisebenzi ehlukene yamanzi ikhululekile. Ngingathanda ukuthi iqine kancane ukuze ingasheleli phakathi kwemisebenzi emibili yamanzi kalula. Kepha kukonke, Kuhle.
Bengidinga umpompi omusha njengoba umpompi wami wasekhishini oneminyaka engu-12 unqume ukuthi sekuyisikhathi sokudonsa kodwa okubi nakakhulu ukuthi wawuconsa ngaphansi kosinki. Ngabiza indoda ephathekayo futhi ukuqokwa kwakhe okulandelayo okuvulekile kwaba ezinsukwini ezi-4. Angiyena uchwepheshe ompompi ngakho ngaya ku-WOWOW futhi ngayalela le ompompi ngoba yayinezibuyekezo ezinhle kakhulu futhi ngokumangazayo ukuthi yayingabizi. I-WOWOW iqaphele ukuthi izofika ekhaya lami ezinsukwini ezimbili futhi yakwenza. Ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga.
Le ompompi ithathe indawo yompompi omdala wokudonsa isibambo esisodwa. Uboshelwe ukufaka esikhundleni sesifutho namapayipi epulasitiki lapho bezoqala ukuvuza. Le nickel entsha ebhulashiwe idonsela phansi ibukeka yesimanje futhi yinhle kusinki yethu yasekhishini yensimbi engenasici! Bekulungele ukufaka. Eqinisweni ngesiqondiso sami, izingane zami ezineminyaka engu-2, 15 ubudala zingene esikhundleni sompompi ngokwazo. Angikwazi ukukhasa ngaphansi kokunuka kabi njengoba ngangijwayele ukukwazi uku-LOL Ingxenye enzima kunazo zonke ukukhipha ompompi wakudala…
Kuze kube manje, ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga futhi ngingancoma nakanjani!
Ngafaka le ompompi ekhishini lami! Umkami wayibona futhi wayithanda. Siya ekubukeni kwendlu yepulazi futhi yilokhu kanye ebesikufuna ukufaka okulula awudingi nemiyalo. Angisiye umuntu osebenzisekayo kepha ngakuqonda !!! Kungithathe imizuzu engama-30 ukuyikhipha endala ngiyifaka entsha !!! Ngingathenga enye uma ngiyidinga !!! Ukuthunyelwa okusheshayo nakho
Bekufanele ngithathe indawo yompompi wami wasekhishini waseMoen. Wayengakaze athenge ompompi ngaphambili futhi wamangala ngezindleko! Ngithole i-WOWOW futhi intengo ibiyinhle ngakho-ke ngiyidubulile. Kubukeka kumangalisa, kusebenza kahle futhi ngicabanga nokuthi ingcindezi yami yamanzi ingcono. Umngani ebengimfakile ubengenazo nhlobo izinkinga.
Isitayela sepompo esihle futhi kulula kakhulu ukusifaka ukuze uzenzele ngokwakho. Bekufanele ngisike umpompi wami wenhlanganisela endala ngethuluzi lokujikeleza njengoba ukuxhuma kwakonakalisiwe. Umhlangano omusha uhambe kalula kakhulu njengoba ukuxhumana okuhlinzekwe kwenziwe kahle futhi kucatshangelwe kahle. Ngiyincoma kakhulu le nto kunoma ngubani onentshisekelo yokufaka ompompi basekhishini lakhe.
Leli ompompi elihle elilingana kahle ekhishini lami. Ngayithenga esikhundleni sepompo kaMoen eneminyaka engu-13. Ukufakwa bekubukeka kulula, kepha kuye kwadingeka ukuthi iplamba yami iyeke ukuyifaka ngenxa yokungafinyeleleki nobunzima bokukhipha ompompi wakudala. Uthe uhlabekile umxhwele futhi ufake nezinye zalolu hlobo. Angikwazi ukukhuluma ngokuqina njengoba nje bengikufakile, kepha kungukuthuthuka okucacile.
Ikhwalithi ephezulu, zonke izingxenye zimakwe ngokucophelela ngokuxhuma nokuhlangana okulula. Ibhawodi enkulu eyengeziwe - esetshenziswe ngaphansi kukasinki (ukuvikela umpompi osinkini) ithuthuke kakhulu kunamabhawodi ajwayelekile amadala - kulula ukuyifaka ngesandla bese ushayela umshayeli. Lena umpompi wokuqala wasekhishini engiwufakile; ngakho-ke, uma ngikwazi ukukufaka kalula lokhu, noma ngubani angakwazi
Sike safaka le ompompi amasonto ambalwa manje futhi kuze kube manje isebenze kahle. besingenakho ukunambitheka okuvuza noma okubi Noma ukungcolisa njengokunye kokubuyekezwa okungekuhle. Umyeni wami uyifake cishe imizuzu engama-30. Ibukeka futhi izwakala ikhwalithi ephezulu futhi ibiyinani elihle uma liqhathaniswa nezinye. Ngijabule kakhulu ukuthi ngithenge lokhu! Ngingancoma!
It is a isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu enkulu intengo. Ngisebenzise amanye ompompi ababiza kakhulu esikhathini esedlule, kepha lena isebenza kahle ngokulinganayo!. Ihlangabezana nezidingo zami ngokuphelele. Ingcindezi yamanzi ekhishini lami ingcono kakhulu njengoba sesithathe indawo yompompi wakudala. Ngincoma kakhulu lokhu kusebenza ngempumelelo ngaphandle kokuthi ufuna imodeli ye-deluxe ezoba kathathu noma kane ngentengo.
Benginezinkinga zokufaka kepha lokho kungenxa yokuthi isinki sami senziwe kabi. Ngemuva kokuthi inkinga ilungiswe kwaba lula! Umpompi wami omusha muhle futhi muhle! Ngijabule kakhulu ukuba nompompi omude futhi angisadingi ukusebenzisa izinkomishi ukugcwalisa amapani ami amade ngamanzi. Isici sokukhipha naso sihle!
Le ompompi ngqo yayingaphezu kwama- $ 200 edepho yasekhaya nakumadiadi! Ngiyabonga ngokungongela imali engaka !!
Lokhu kuthengwe njengokuvuselelwa kokulungiswa kwekhishi lami, okuthathe indawo yompompi ka-20 + yo. njengokuphakama ukuze ugcwalise ibhodwe elikhulu futhi ulihlanze. ukuba nomsebenzi wokusakaza nokufafaza konke okukodwa ngokuthinta inkinobho kuyinto enhle, ukuphela kwensimbi engagqwali ibhulashi kubukeka kahle futhi buhlanzekile. Inani elikhulu lentengo.